म मुस्कुराउन चाहान्छु, मेरो ओठको मस्कान फर्काई दिनुहोस् – मुस्कान खातुन (भिडियो) – Online Nepal
April 28, 2020 301
रुपनी जि.एम – “म मेरो ओठको मुस्कान गुमाउन चाहाँदिन । म अस्पतालको बेडमा छटपटाई रहँदा तपाँईहरु सबैले मलाई हिम्मत नहार्न दिएको सुझाव कहाँ बिर्सिएकी छु र ? तपाँईहरुको साथ र सहयोगले नै आज मेरो ओठमा हराईसकेको मुस्कान फर्किएको छ । मलाई आज पनि तपाँईहरुको त्यही माया, साथ र सहयोगको खाँचो परेको छ । मेरो साथमा त हुनुहुन्छ नि हैन ?” मर्म स्पर्शि आशयमा आफ्नो भनाईलाई भिडियोमा कैद गरेकी छन् फेरी एकपटक मुस्कान खातुनले ।
वि.सं. २०७६ भाद्र २० गते उनी माथि दुई जना केटाहरुले ए’सिड आ;क्रमणमा गरेका थिए । त्यतिबेला उनी जम्मा १४ वर्षकी थिईन् । १४ वर्षकी मुस्कान कक्षा ९ मा पढ्दै थिईन् । जतिबेला उनीमाथि ए’सिड प्र;हार गरियो त्यो समयमा मुस्कान स्कूलबाट घर फर्कदैं थिईन् ।
आफ्नै सुरमा घर पुग्ने हतारमा हिंडेकी मुस्कानलाई बाटोमा दुईवटा केटाहरुले पानी पिउ भनि दिएका थिए । ती केटाहरु मुस्कानले चिनेका थिएनन् त्यसैले उनले नचिनेको मान्छेले दिएको नखाने भनेर पानी खान अस्विकार गरेकी थिईन् । आफुहरुले भनेको नमानेपछि ती दुवैले नै मुस्कानको अनुहारमा ए’सिड छर्किएर भागेका थिए ।
जब मुस्कानको अनुहारमा त्यही बोतलको पानी प¥यो तब बल्ल उनलाई थाहा भएछ कि जुन बोतलको पानी पिउन भनिएको थियो त्यो बोतलको पानी त पानी नभई ए’सिड पो रहेछ । भाग्यबस त्यो ए’सिड अन्य ए’सिड पिडितहरुको तुलनामा मुस्कानको रुपै बिग्रने गरी र पुरै शरिरै भरि पर्न पाएन ।
Prevतनाव भयो भन्दै सुष्मा फेरी आइन् लाईभमा : पूजासंगै पढ्ने साथीले फोन गरेर शुष्मालाई यसो भनिन् (भिडियो हेर्नुस्)
Nextदुबईमा आफ्नै जन्मदिनको दिन एक नेपालीको मृ त्यु, परिवार शोकमा